Ciidamada Booliiska DF Oo Gacanta Ku Dhigay Burcad Dadka Dhici Jiray – Bandhiga
Ciidamada Booliiska DF Oo Gacanta Ku Dhigay Burcad Dadka Dhici Jiray
Ciidamada Booliska saldhigga degmada Waaberi ayaa xalay fiidkii gacanta ku dhigay mid ka mid ah Saddex nin oo dhac u geystay shacabka qaar ee ku dhaqan gudaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.
Saddexdan nin ayaa telefoonada gacanta ka soo dhacay shacab ku nool Waaxda Hantiwadaag ee degmada Waaberi, waxayna wateen ilaa Laba Bastooladood oo dadka ay ku handadayeen.
Qabashada mid ka mid ah raggan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ay isku dayeen inay telefoonka ka dhacaan wiil uu dhalay Sarkaal NISA ka tirsan oo degan degmada Waaberi, balse waxa ay iska caabin kala kulmeen askari ilaalo u ahaa sarkaalka oo fadhiyay banaanka guriga, waxaana dhexmartay is rasaaseyn.
Ciidamada Booliska degmada Waaberi ayaa ku baxay rasaasta ka dhacday gudaha degmada, waxayna ugu dambeyn ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah Saddexda nin oo watay Bastoolad.
Ninkan ayaa lagu xiray saldhigga Booliska degmada Waaberi halkaasi oo ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo qaarkood laga soo dhacay telefoonadooda gacanta, kuwaasi oo la diiwaangeliyay si loogu baadi goobo telefoonadooda, sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa ku daba jira ragga kale ee baxsadka ah.
Kooxaha burcada ah ee ku hubeysan Bastooladaha ayaa xaafadaha qaar ee degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay xilliyada habeenkii dhac ugu geystaan dhalinyarada telefoonada ku isticmaasha gidaarada xaafadahooda, inta badan ma suuragasho in gacanta lagu dhigo.